सर्वाधिक सफल भए, तर आत्महत्या गरे यी पाँच व्यवसायीले !
काठमाण्डौ । जीवनमा सफलता पाउनु र धेरै धनदौलत भेला पार्नुको मतलब तपाईंलाई सबैथोक प्राप्त भएको भन्ने हुँदैन । कर्पोरेट विश्वमा यस्ता घटना पनि भएका छन्, जो अत्यन्त सफल भएका थिए, जसको जीवन अरुका लागि लोभलाग्दो थियो र कमाई र शान सौकत पनि उस्तै थियो, तर तिनै सफल मानिसहरुले आफ्नो जीवन अल्पायूमै अन्त गरिदिने कठोर निर्णय लिएका छन् । यो सूचिमा नयाँ...
थाहा छ ? आकाशबाट यसरी बर्सिन्छ करोडौं रुपैयाँ
काठमाण्डौ । तपाईंलाई थाहा छ ? अन्तरिक्षबाट धर्तिमा झर्ने उल्कापिण्डले समेत तपार्इंलाई रातारात करोडपति बनाइदिनसक्छ । दुलर्भ बस्तुमा पैसाको खोलो बगाउने लगानीकर्ताबीच यी उल्कापिण्डहरु निकै लोकप्रिय छन् । दुनियाँका लगभग हरेक भागमा भेटिइने दोश्रो ग्रहको यस्तो चट्टानको टुक्राका लागि लिलामीको दौरान करोडौं रुपैयाँसम्मको बोल कबोल हुने...
-रशेल नूवेर, बीबीसी अमेरिका र रुसमा हिजोआज तीनसय व्यक्ति सधैंका लागि गुमनाम हुँदैछन् । उनीहरुलाई यसबेला निकै चिसो वातावरणमा राखिएको छ । यस्तो कामलाई ‘क्रायोप्रेजर्वेशन’(शरीरका सेल र टिस्यूहरुलाई पानी जम्ने भन्दा अझ चिसो वातावरणमा राखेर जोगाउने प्रक्रिया) भनिन्छ । यी तीन सय व्यक्तिको मुटुको धड्कन चल्न छाडेपछि उनीहरुलाई औधी चिसो...
राति मर्छन, दिनमा बाँच्छन् यी दाजुभाई !
पाकिस्तानको बलुचिस्तान राज्यस्थित क्वेटामा बसोबास गर्ने रासिद, इलियास र सोएबलाई अचम्मको रोग छ । सूर्यास्त हुनेबित्तिकै उनीहरूको शरीरले अचानक काम गर्न बन्द हुन्छ । क्वेटाभन्दा १५ किमि टाढा मियाँकुन्डी गाउँमा बसोबास गरिरहेका यी तीन जना दाजुभाइलाई लागेको रहस्यमय रोगका कारण पाकिस्तानका चिकित्सकहरू छक्क मात्रै छैनन्, उपचार गर्न नसकेर...
नयाँदिल्ली । आफूलाई चतुर नेताको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर नेपाल भ्रमणमा आउने खबरले चर्चा पाइरहेको छ । यही बेला नरेन्द्र मोदीको झूठको ठूला पर्दाहरु खुल्ने संकेत देखिएको छ । उनले आफूलाई मानविकी संकायको डिग्री होल्डर बताउँदै आए पनि वास्तवमा उनले कुनै डिग्री नलिएका र डिग्रीको...
बीबीसीले लेख्यो–कनकमणि दीक्षित शाही कालका मुख्यसचिव !
काठमाण्डौ । भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र बैध आयभन्दा बढी खर्च देखिएको भन्दै अख्तियारद्वारा पक्राउ नेपालका वरिष्ठ पत्रकार तथा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित राजाको शासनकालमा राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा नागरिक समाजको ब्यानमार अग्रपंक्तिमा थिए । तपाईंले बुझेको र जानेको कुरा यही हो । तर कसैले तपाईंलाई एकाएक...
यस्तो नेपाली प्रेम अरुमा कहाँ, अन्त कहाँ ?
काठमाण्डौ । ५५ वर्षदेखि नेपाल बस्दै आएकी चर्चित बेलायती पत्रकार बारबरा एडम्सको ८६ वर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भयो । उनको निधनसँगै उनमा रहेको नेपाल र नेपालीप्रतिको प्रेम, आगाध मायाको अनेकन प्रसंगहरु सार्वजनिक भएका छन् । उनले नागरिकता प्राप्तिको संघर्ष चलिरहेकै बेला एक मार्मिक निवेदन सरकारी मन्त्रीको नाममा लेखेकी प्रसंग वरिष्ठ...
६६ वर्षअघिको नेपालको रोमाञ्चक दृश्य समेटिएको एउटा दुर्लभ भिडियो
काठमाण्डौ । पुरानो नेपाल कस्तो होला ? अहिलेको पुस्तामा यो प्रश्नले कोट्याइरहन्छ । अझ निकै पुरानो नेपालको दृश्य, फोटो देखियो भने त मनै रोमाञ्चक हुन्छ । एक विदेशी नागरिकले ६६ वर्षअघिको नेपालको रोचक दृश्य समेटेर तयार पारेको एक डकुमेन्टी हालै सार्वजनिक गरेका छन् । स्वीट्जरल्याण्डका नागरिक टोनी हेगन हालै नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र...